Fehikibo Conveyor maivana, lamba vita amin'ny fingotra, manify silikona - Cayce Mey
Fanodinana vy matihanina. Za-draharaha efa za-draharaha & manana fitaovana
tso-po sy fahatokisana manintona ny mpanjifa manerana an'izao tontolo izao
Wuxi Cayce May Technology Trading Co., Ltd dia miorina ao amin'ny ivon-toeran'ireo faritra ara-toekarena ao Yangtze River Delta, renirano Yangtze, any Taihu. Atsinanana hatrany amin'ny ivon-toekarena sinoa-Shanghai 150 kilometatra, andrefan'ny renivohitra taloha-Nanjing 150 kilometatra, atsimo mankany amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Wuxi Sunan 50 kilometatra. Jinghu sy yanjiang làlam-be roa mifanena any amin'ny faritanin'i jiangyin, ny tetezana ao jiangyin Yangtze River dia mampita ny avaratra sy atsimon'ny reniranon'i Yangtze, foiben'ny fitaterana lehibe ao amin'ny renirano Yangtze any andrefany. Wuxi Cayce May Technology Trading Co., Ltd dia miorina eo atsinanana atsinanana amin'ny zaridainam-panjakana yunting.
Farany Avy amin'ny News Blog
Taorian'ny nijanonany tao amin'ny indostrian'ny silika ...
Rehefa avy nijanona ela tao amin'ny indostrian'ny silikônina dia maro ny mpanjifa no handre ity fanontaniana ity: ny vokatra vita amin'ny silika mitovy habe na mitovy firafitra aminy dia samy manana ny vidiny. Amin'ity lohahevitra ity, nisy taloha dia sahirana aho nandritra ny fotoana kelikely. Mba hamahana ity olana ity, ankoatry ny ...
Fomba fitsaboana eny amin'ny toerana ho an'ny conveyor be ...
1. Araka ny haben'ny habetsahan'ny fitaterana dia mizara ho: B500 B600 B650 B800 B1000 B1200 Modely mahazatra toy ny B1400 (B dia midika ho sakany, milimetatra). Amin'izao fotoana izao, ny fahaiza-manao famokarana lehibe indrindra an'ny orinasa dia ny fehikibo conveyor B2200mm. 2. Araka ny ...